Walaaca laga qabo in doorashadda Madaxweynaha si nabad ah u dhacdo | KEYDMEDIA ENGLISH
Walaaca laga qabo in doorashadda Madaxweynaha si nabad ah u dhacdo
Mahad Salaad, oo ah Xildhibaan mucaaradka katirsan ayaa sheegay dhawaan in doorashadda Madaxweynaha dalka ka dhacaynin, isagoo kula taliyay siyaasiyiin inay naftooda ilaashadaan, maadaama uu socda beegsi iyo shirqoollo dilal ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Waxay siyaasiyiin dhowr ah muujiyeen walaac xoog leh oo ay ka muujiyeen amniga Muqdisho, kadib markii March 23 la weeraray Garoonka diyaaradaha, iyadoo laga soo galay dhanka xerada Afisyooni, oo lagu qabanayo doorashadda Madaxweynaha.
Weerarka Garoonka waxay dad badan aaminsan yihiin in ujeedkiisu ahaa in la diro fariin, taasoo ah in la weerari karo Afisyooni xili kasta, iyadoo ay soo baxayaan tuhuno badan oo ku aadan inay jirto wadashaqeyn iyo fududeyn weerarada Al-Shabaab, taasoo ka imaanaysa gudaha Villa Somalia.
Labo qof oo hubeysan, islamarkaana xiran dareeska Ciidanka NISA, oo wata Gaari la yaqaano ayaa tagey irida Garoonka dhinaca Marine Gate, waxayna kusoo gudbeen ID card NISA, iyagoo kadibna si toos ah u galay Garoonka diyaaradaha, oo 6 qof oo 5 kamid ah ajnabi ah ku dileen.
23-kii March, waxaa Beledweyne lagu qaarijiyay Amina Maxamed Cabdi, oo ahayd Xildhibaan katirsan baarlamaankii 10aad, waxaana la dilay xili ay mar 3aad u ololeynayso kursiga ay ku fadhiso.
Waxay ahayd shaqsi afkaarteeda aan la gamban, aadna ugu dhiiran ka hadalka dulmiga iyo tacadiga Shacabka loo geysto, iyadoo mudooyinkii ugu dambeeyay u dagaalamaysay cadaaladda Ikran Tahliil.
Qorshaha socda ee Fahad iyo Farmaajo ayaa ah abuuritaanka qalqal amni, dilal lagala shaqeynayo Al-Shabaab inay ku sameyso Musharixiin mucaarad ah iyo kahor tagista qorshaha Rooble in 14-ka April la dhaariyo Baarlamaanka 11aad.
Sanadkii 2aad oo dheeraad ah ayuu Farmaajo si sharci-darro ah ugu fadhiyaa kursiga Madaxweynaha, wuxuuna noqdey Madaxweynihii ugu mudada dheeraa Siyaad Barre kadib, isagoo lix sano xukunka haysta.
Rooble ayaa afkiisa ka qiray in loo caga-jugleeyay, oo fariimo hanjabaad ah loo soo diray wax yar kahor inta aan la dilin Xildhibaanada Amina, isagoo sheegay in uusan waxba qaban karin, oo noloshiisa khatar ku jirto.
Waa hadal miisan leh, oo muujinaya in Fahad iyo Farmaajo diyaar u yihiin inay dad badan u dilaan xukunka sidii ay kusii joogi lahaayeen, waxayna adeegsanayaan Al-Shabaab, oo dembiyadooda ku raad-tiranayaan.
Fahad Yaasiin ayaa laga saarey liiska Xildhibaanada lasoo doortay, taasina waxay sii xoojinaysaa khatarta iyo xaaladda jirta, maadaama nin caraysan uu yahay, islamarkaana ku fekarayo inuu sameeyo falal baajin karo doorashadda Madaxweynaha sanadkan.
Comments Topics: al-shabaab doorashadda soomaaliya